စီးပွားရေးအတွက်ဆုတောင်းပါ။ ? အလုပ်နှင့်ကြွယ်ဝမှု | စိန့်ဂျူး Thaddeus
စီးပွားရေးအတွက်ဆုတောင်းခြင်း el Mundo ၀ ိညာဉ်ရေးရာသည်ကျွန်ုပ်တို့မလွတ်မြောက်နိုင်သော၊ လျစ်လျူရှု။ မရသောအမှန်တရားဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြိုးပမ်းမှုအသစ်တစ်ခုကိုစတင်သောအခါတွင် စီးပွားရေးအတွက်ဆုတောင်း ငါတို့စတင်တော့မယ်
ကောင်းမြတ်သောစီးပွားရေးဖြစ်ရန်၊ ကောင်းသောစွမ်းအင်သည်အချိန်တိုင်းစီးဆင်းစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သာယာဝပြောရေးကိုတောင်းဆိုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးထဲသို့ ၀ င်ရောက်သူတိုင်းသည်ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့်အေးချမ်းမှုကိုခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အရေးကြီးသောအရာမှာသူ့အားခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌ကောင်းချီးပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းခြင်းသည်တန်ခိုးရှိသည်ဟုယုံကြည်ရန်ဖြစ်သည်။
1.3 St.Jude Thaddeus အားစီးပွားရေးအတွက်ဆုတောင်းပါ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဆုတောင်းခြင်းသည်အရေးကြီးသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရမည့်လမ်းကြောင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုကိုအမှန်တကယ်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ခုတည်းသောအရာတစ်ခုကိုလုပ်ရန်လိုသည်ကိုသတိရပါ။ ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လိုအပ်သောလိပ်စာကိုရရှိနိုင်သည် ကောင်းမွန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်ဖို့၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်သူတော်စင်များနှင့်ဆက်သွယ်ရန်ဝိညာဉ်ရေးတွင်အရည်အချင်းပြည့်မီသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းကျိုးအတွက်အခြားသူတစ် ဦး လာရန်မစောင့်နိုင်။ သူငယ်ချင်းသို့မဟုတ်မိသားစုဝင်ကိုအားကိုးနိုင်သည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာတာ ၀ န်သည်ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆုတောင်းချက်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်ပါ ပဌနာ ကအခက်ခဲဆုံးအရာဖြစ်နိုင်ပါတယ် ငါတို့ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ငါတို့တောင်းတာတွေအများကြီးရောက်လာလိမ့်မယ်.
ကျွန်ုပ်အောင်မြင်နိုင်အောင်ဒီစွန့်စားမှုအသစ်ထဲကိုဝင်ပါ။ ကျွန်ုပ်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်မိသားစုနှင့်ကျွန်ုပ်အမှုဆောင်မည့်ဖောက်သည်များ။ ကောင်းသောစီရင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ကိုပေးပါ။
ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ကြွယ်ဝမှု၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်လမ်းညွှန်၊ အတွေးအခေါ်သစ်များနှင့်အရာရာကိုလုပ်နိုင်သောဘုရားသခင့်ရှေ့မှောက်၌ကျွန်ုပ်တို့တောင်းလျှောက်နိုင်သည့်ထပ်ဆင့်တောင်းဆိုမှုများ၊
ဆုတောင်းခြင်းသည်ဘုရားသခင်နှင့်စကားပြောနေကြောင်းသတိရပါ၊ ထို့နောက်သူနှင့်စကားပြောပါ၊ တုန့်ပြန်ရန်၊ အချိန်အပိုင်းအခြားကိုသင့်မျက်နှာသာရရန်သူ့အားအချိန်ပေးရန်မမေ့ပါနှင့်။
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိုစတင်ရန်သင်၏အကူအညီကိုတောင်းခံပါ၏သခင်။ သငျသညျအကြှနျုပျ၏အင်အားအကောင်းဆုံးမဟာမိတ်နှင့်ငါ့အကောင်းဆုံးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်အောင်မြင်နိုင်အောင်ဒီစွန့်စားမှုအသစ်ထဲကိုဝင်ပါ။
ကျွန်ုပ်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်မိသားစုနှင့်ကျွန်ုပ်အမှုဆောင်မည့်ဖောက်သည်များ။ ကောင်းသောဥာဏ်သတ္တိကိုပေးသနားတော်မူပါ။
လူများစွာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန် ငါတို့အလုပ်လုပ်နေစဉ်တဖြည်းဖြည်းလာသည်ကိုသတိမပြုမိဘဲကြွယ်ဝစွာပျော်မွေ့လိုကြသည်။
ထို့ကြောင့်အလုပ်မလုပ်ဘဲများစွာသောတောင်းခံခြင်းသည်အချည်းနှီးဖြစ်သည်။ အလုပ်မလုပ်ဘဲယုံကြည်ခြင်းသည်သေပြီဟုသမ္မာကျမ်းစာကကျွန်ုပ်တို့အားသွန်သင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်အားကျွန်ုပ်တို့အားများစွာပေးကမ်းရန်တောင်းခံရမည်။
ဝါကျတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရေးတတ်ဖို့လိုတယ်၊ ငါတို့တကယ်မလိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုမတောင်းနိုင်ဘူး၊ တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုတောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်စီးပွားရေးအရတော့မဟုတ်ဘူး။
St.Jude Thaddeus အားစီးပွားရေးအတွက်ဆုတောင်းပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ိညာဉ်တော်ရှင်သန်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်နှင့်ကိုယ်တော်၏တရားမျှတမှုကိုရှာဖွေရန်နှင့်အခြားအရာအားလုံးကိုထပ်မံဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်သည်ဟုဘုရားသခင့်နှုတ်ကပါဌ်တော်ကသင်ကြားပေးသည်။ ဘုရားသခင်ကတိထားတော်မူသောကြောင့်လမ်းခရီး၌။
ဆုတောင်းခြင်းကိုယုံကြည်စိတ်ချကြပါစို့။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တောင်းသောအရာများသည်ကျွန်ုပ်တို့ကို ပို၍ လျင်မြန်စွာရောက်စေလိမ့်မည်။